တချို့တွေက တကယ်မရူးပဲ ကောက်ကျစ်ြ ခင်လို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ မင်းသားချော ဒေါင်း…. – CELE WINGAGAR
တချို့တွေက တကယ်မရူးပဲ ကောက်ကျစ်ြ ခင်လို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ မင်းသားချော ဒေါင်း….
တချို့တွေက တကယ်မရူးပဲ ကောက်ကျစ်ခြင်လို့ ရူးချ
တခြို့တှကေ တကယျမရူးပဲ ကောကျကဈြခွငျလို့
လူတြေက အလြအပနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်တေျာ့မ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္တိုင်း မက္ပါဘူး။ လြပြီးရင်း လြခ်င္တာပါပဲ။ဒါပေမယ့် ကိုယ့္ကိုယ္ကို လြတယ္လို့ပဲ ထင်ကြပါတယ်။ မ္က္နျာသြင်္ပင္ကလည်း ပင္ကိုစရိုက္ကို ဖော်္ပနိုင်သလိုနှုတ္ခမ်းကလည်း သင့်ရဲ့ ပင္ကိုစရိုက္ကို ဖော်ပေပးနိုင္ပါတယ်။၁။ ကြီးမားသော နှုတ္ခမ်းဖူးဖှူုတ္ခမ်း ဖူးဖူးလေး ဆိုရင်တော့ အရင္ဆုံး္ပေး္မင္မိတာက Angelina Jolie ပါပဲ။ ဒီနှုတ္ခမ်းပုံစံက အေတ္ကာို လြပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ နှုတ္ခမ်း
၆။ သေးငယ်သော နှုတ္ခမ်းဖူးဖူးလေးသေးငယ္တဲ့ နှုတ္ခမ်းလေးကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူတြေက အမြဲအနစ္နာခံသူ တြေပါ။ တ္ခားသူတြေရဲ့ဆန္ဒကို အမြဲ ဦးစားပေးသူပါ။စည်းကမ်း ကြီးသူလည်း္ဖစ္ပါတယ်။ အလုပ္ကို ကြိုးစားပြီး္ပသနာမ္ဖစ်အောင် အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ကြပါတယ်။သင့် နှုတ္ခမ်းပုံစံလေးက္ပော်ပေနတဲ့ သင့်ရဲ့ပင္ကိုစရိုက် နဲ့ သင့် အေကြာင်းမ်ာလူတြေက အလြအပနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်တေျာ့မ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္တိုင်း မက္ပါဘူး။ လြပြီးရင်း လြခ်င္တာပါပဲ။ဒါပေမယ့် ကိုယ့္ကိုယ္ကို လြတယ္လို့ပဲ ထင်ကြပါတယ်။ မ္က္နျာသြင်္ပင္ကလည်း ပင္ကိုစရိုက္ကို ဖော်္ပနိုင်သလိုနှုတ္ခမ်းကလည်း သင့်ရဲ့ ပင္ကိုစရိုက္ကို ဖော်ပေပးနိုင္ပါတယ်။
၁။ ကြီးမားသော နှုတ္ခမ်းဖူးဖူနှုတ္ခမ်း ဖူးဖူးလေး ဆိုရင်တော့ အရင္ဆုံး္ပေး္မင္မိတာက Angelina Jolie ပါပဲ။ ဒီနှုတ္ခမ်းပုံစံက အေတ္ကာို လြပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ နှုတ္ခမ်း ဖူးဖူးတြေကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူကေတာ့ ကြင္နာတတ်သူ၊ ရက်ရောပြီး စေတနာကောင်းသူ၊ စာနာတတ်သ္ဖူစ္တယ်…ဘယ်လောက် ကြင္နာတတ်သူလဲ ဆိုရင် ကြောင်လေးတြေက္မိုင်ရင်တောင် ခ္စ်နေတတ်သူပါ။ အလှူ လုပ်ရတာကို ဝါသနာ ပါသူလည်း္ဖစ္တယ်
၂။ အေပ်ါနှုတ္ခမ်းက အောက္နှုတ္ခမ်းထက် ကြီးသူဒီလို နှုတ္ခမ်းပိုင်ရျင္က ပေ်ာ်ပေ်ာ်နေတတ်ပြီး စိတ္ထိခိုက္လည်း လြယ္ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့တစ္ကိုယ်ကောင်း ဆန်ပြီး ထင်ပေါ် ကေ်ာ်ကြားသူလည်း္ဖစ္တယ်။
၃။ အောက္နှုတ္ခမ်းက အေပ်ါနှုတ္ခမ်းထက် ကြီးသူဒီလို နှုတ္ခမ်းပိုင်ရျင်တြေက စိတ်ကောက်နေတဲ့ ကေလးတြေရဲ့ နှုတ္ခမ်း လိုပါပဲ။ သူတို့က ပေ်ာ်ရွှင်စေနိုင္မယ့် နည်းလမ်းလေးတြေကို သိပြီးဘဝကို အေကာင်းဆုံး္ဖစ်အောင် ကြိုးစားတတ်သ္ဖူစ္ပါတယ်။်င့္ပ်င့္လင်းလင်း္ပောဆိုတတ်ပြီ်းစန့္စား သြားလာရတာကို ကြိုက္နြစ်သက်သူ၊ စိတ္ဓာတ်္ပင်း္ပသ္ဖူစ္တယ်
တော်လှန်ရေး ကာလမှာ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေပေမယ့်လည်းခုချိန်မှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ပြန်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ
ယောက္ခမြ ဖစ်သူဦးဇင်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ြ ပီးမဟုတ်မမှန် သ တင်းမှာတွေထွက်နေတဲ့အပေါ် ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ဇနီး